युरिक एसिड कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
युरिक एसिड कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई ।
खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु।
जोर्नी राति बढी दुख्नु।
दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु।
ज्वरो आउनु, आदि।
Don't Miss it भाेला, पान, पराग खाएर दाँत खराब भएकाे छ भने सेतो र चम्कीलो बनाउने केहि घरेलु उपाए
Up Next कालो अंगुर खाँदाका फाईदाहरु थाहा पाउनुहोस्
कानको समस्यालाई सामान्य घरेलु उपायबाट ठीक पार्न सकिन्छ
जैतुनको तेल जैतुनको तेल पनि कानको दुखाईमा एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । यो तेलमा दुखाई कम गर्ने गुण हुन्छ । जैतुनको…
कस्ता फलफूलमा पौष्टिक गुणका साथै औषधीय गुणहरु पनि पाइन्छ? जानी राखौ
अंगुर अंगुर पनि हामीले अत्यधिक सेवन गर्ने फलमध्ये पर्छ। अंगुरमा पाइने पौष्टिक र औषधीय गुणले मानव शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ।…
स्वादको लागी लसुन खाने गर्नुहुन्छ कि स्वास्थ्यको लागी ? जान्नुहोस् यसका फाईदा
लसुन स्वादका लागि मात्र नभएर औषधीको रुपमा समेत उपयुक्त मानिन्छ । लसुन सबै मानिसका लागि उपयोगी हुन्छ । लसुन सेवन पुरुषका…
यस कारण, फरफराउछ आँखा
सुख्खा आँखा : बुढ्यौली लाग्दै जाँदा अधिकांश मानिसले आँखा सुख्खा हुने समस्या भोग्छन् । कम्प्युटरको बढी प्रयोग गर्ने, एन्टिहिस्टामिन या…